နတ်အကြာင်း သိကောင်းဖွယ်ရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » နတ်အကြာင်း သိကောင်းဖွယ်ရာ
Posted by ချစ်ရင်ထူး II on Oct 2, 2011 in Copy/Paste |9comments
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အစောဆုံးကာလတွေမှာ ကိုးကွယ်ခဲ့ကြတဲ့ နတ်တွေကတော့ ဗြဟ္မဏ၀ါဒီတွေ ကိုးကွယ်တဲ့ နတ်ဒေ၀တာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အေဒီ ၃ ရာစုမှာ ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေက မြန်မာနိုင်ငံထဲကို လမ်းအသွယ်သွယ်ကနေတစ်ဆင့် ရောက်ရှိလာကြရာမှ အယူဝါဒတွေ ကူးစက်ပျံ့နှံ့လာခဲ့တယ်။ အေဒီ(၄)ရာစု ပုဂံခောတ်မှာတော့ ဗုဒ္ဓသာသနာစည်ပင် ထွန်းကားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နတ်ကိုးကွယ်မှုကတော့ ပပျောက်မသွားဘဲ မင်းမဟာဂီရိလို ပျူနတ်တွေ၊တောင်ပြုံးမင်းနှစ်ပါးလို ကုလားနတ်တွေ ၊ မောင်ပိုးတူလို မြန်မာနတ်တွေ၊ တိုးချဲ့ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ အဲဒီကမှ ဒေသဆိုင်ရာနတ်တွေ ပေါ်ထွန်းလာပြန်တော့ မြင်းဖြူရှင်၊ နဲကရိုင်းမယ်တော် ၊အလုံဘိုးဘိုးကြီး၊ ဦးရှင်ကြီး စတဲ့နတ်တွေကို ကိုးကွယ်လာကြပြန်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်နတ်များအကြောင်းကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း လေ့လာနိုင်ခွင့်ရစေရန်နှင့် မန္တလေးဂေဇက်မှ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကို ဗဟုသုတ ရစေရန်ရည်ရွယ်၍စိတ်ကူးချိုချိုစာပေမှထုတ်စေသော “နတ်အကြောင်းသိကောင်းဇွယ်ရာ” စာအုပ်မှထုပ်နှုတ်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၁။ ဗြဟ္မဏ၀ါဒဆိုင်ရာ နတ်များ၊
၂။ နတ်မင်းကြီး(၉)ပါးနှင့် နတ်စစ်သည် (၂၈)ပါး၊
၃။ အတွင်း(၃၇) မင်း နတ်များ၊
၄။ အပြင်(၃၇)မင်း နတ်များ၊
၆။ ဂရိနတ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူတို့၏ အသိဥာဏ်ပညာ တိုးတက်မြင့်မားလာပြီဖြစ်တာကြောင့် နတ်ကိုးကွယ်မှုအစဉ်အလာ မှေးမှိန် ကွယ်ပျောက်လုနီးပါးဖြစ်နေပါပြီ။ သို့သော် ယနေ့အထိယုံကြည်ကိုးကွယ်လျက်ရှိကြတဲ့ နတတွေကလည်း အများကြီးကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။
သမိုးဆိုတာ မကွယ်ပျောက်ကောင်းသလို အယူဝါဒဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ နတ်ကိုးကွယ်မှုသမိုင်းကြောင်းကိုလည်း လူတိုင်း သိရှိနားလည် ထညးသင့်ပါတယ်။
ရှေးခောတ်အယူအဆ ဆိုတာ(ဆက်လက် ခံယူသင့်၊မသင့်) ထက် (ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ သင်္ကေတအမှတ်) အနေနဲ့တော့ ထိန်းသိမ်းထားသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း……..။
ကျွန်တော် တစ်နေ့ကို အကြောင်းအရာ တစ်ခု ဆက်လက်၍ ရေးသားဖော်ပြပေးသွားပါမည်။
၁၊၂၊၃၊ … စီနေရာထဲက အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းကိုဆိုလိုတာပါလား၊
အဲဒါတွေ ပြီးရင် နတ်တ ပါး (အဲ အဲ တစ်ယောက် လို့ပြောရမလား၊ဝေမာနိကပြိတ္တာ ဘုံထဲမှာပါတဲ့
ဦးရှင်ကြီးတို့ ဦးမင်းကျော် တို့ကို ဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ ၊တစ်ကောင် လို့ပြောရမလား) ခြင်းရဲ့
အကြောင်း- ရာဇ၀င် (အဲဒါလဲမဟုတ်ပြန်ဘူး ၊သူတို့က ဘုရင်မှမဟုတ်တာ၊ပုံပြင်လား၊ဒဏ္ဍာရီလား)
ဂုတ်ထိပ်တံတားက နတ်နဲ့ ၊အင်းဝတံတားကနတ်အကြောင်းလေးပါရေးဦးနော်..ဟဲ ဟဲ
ကျွန်တော်သိချင်တာလေး ပို့စ် တစ်ခုတင်ပြီးမေးပါဦးမယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကလည်း တစ်ကယ်တော့ နတ်ဆိုတာကိုသိပ်မယုံပါဘူး။ မယုံဘဲနဲ့ဘာလို့ရေးလဲဆိုတော့ ဗဟုသုတ အနေနဲ့သိစေချင်လို့ပါ။ နတ်ကတော်တွေက အရက်ကိုဘယ်လောက်သောက်သောက် မမူးကြပါဘူး အဲဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ ဧကရာဇ်ပင်ရဲ့အမြစ်ကို သူတို့နတ်က ခါနီးရင်ပါးစပ်ထဲငုံထားလို့ပါဘဲ။ထားပါတော့…small cat ပြောတာဟုတ်ပါတယ်။ ၁။ ၂။ ၃။ စီနီယာအတိုင်း ဖော်ပြ ပေးသွားမှာပါ။ တစ်ယောက်ပဲပြောပြော၊ တစ်ကောင်ပဲပြောပြော၊ တစ်ပါးပဲပြောပြော ရပါတယ်။အဲဒါတွေကတော့နေရာဒေသ အလိုက်အခေါ်အဝေါ် မတူ တတ်ကြပါဘူး။ သူတို့ တစ်ဦးချင်း စီရဲ့ Biography ကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ ခုလိုမေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ကိုလည်း မရှင်းလင်းတာရှိရင် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
နတ်သမိုင်းကို ရေးတာထက်စာရင် သူတို့ကို ဘာလို့ အခုထက်ထိ ကိုးကွယ်နေရသလဲဆိုတာ ပိုေ၇းသင့်တယ်ထင်တယ်…
မယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေ များလာတယ်ဆိုပေမယ့် တောင်ပြုံးပွဲတော် ချိမ့်ချိမ့်သဲသဲ ကျင်းပနှိုင်တာ အားလုံးအသိပါ။
ဗုဒ္ဒဘာသာကို ကိုင်းရှိင်းယုံကြည်ပေမယ့် တရားထိုင် ပုတီးစိတ်ပေမယ့် ဘိုးတော်အောင်မင်းခေါင်၊ဂမ္ဘီရ ၊ လာဘ်ပွင့် ဓါတ်ပွင့် ၊ ပဌန်းဆက် စတာတွေကို မပြစ်ပယ်နှိုင်ကြသေးတာ..
ဘုရားထီးတင်တာတောင် သိုက်အုပ် ၊ သိုက်ချုပ်တွေကို ပူဇော်ပွဲ ပေးနေကြတာ
ဘာကြောင့်ဆိုတာ စစ်တမ်းအနေမျိုး ရေးသားပေးနှိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်…
ဟုတ်ကဲ့ပါ ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မှော်ဆရာ ။တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်ကလည်း နတ်အကြောင်းကိုလေ့လာနေတဲ့ သူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ် ၊ ကျွန်တော်လေ့လာလို့ရသလောက်ကို တခြားသူတွေကို ဗဟုသုတ အနေနဲ့တင်ပြပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာခြုံလွှမ်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ နတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဓလေ့ဟာ ယနေ့ထိတိုင် မပျောက်ပျက်နိုင်ဘဲရှိနေပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ သက်ရှည်ကျန်းမာလိုကြတယ်၊ ဒါမျှမက ကြီးပွားချမ်းသာချင်ကြတယ် ၊ဒီထက်မက မျက်နှာပွင့်လန်း၊ ပြောသမျှ၊ ကြံစည်သမျှ အောင်မြင်လိုကြပါတယ်။ အဲဒီလို “ ဆန္ဒ” တွေကို “ကိုယ့်အား” မဟုတ်သော “တစ်ပါးအားကိုးနဲ့” ဖြည့်ဆည်းဖို့ ကြိုးစားနေသမျှ နတ်ကိုးကွယ်မှုဟာလည်း ရှိနေဆဲ သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ ပပျောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာ သိပ်မလွယ်ကူလောက်ပါဘူး မှော်ဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
အမရာလည်း နတ်ကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့အနီးအနားကလူကြီးတွေကိုမေးကြည့်ပေမဲ့ ဘယ်သူမှရေရေရာရာမဖြေနိုင်ကြပါဘူး။ ခုလို သေသေချာချာလေးသိရမယ်ဆိုတော့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမရာ၊ ကျွန်တော်လည်း ဆက်လက်လေ့လာနေပါတယ်၊ ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရေးသားတင်ပြပေးသွားမှာပါ။ ကျွန်တော်တင်ပြ ပေးတာနဲ့ အယူအဆ၊ ကွဲလွဲနေတာများရှိရင်လည်း ပြန်လည်ပြောကြားပေးစေလိုပါတယ် ။
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို.. စံနစ်တကျနဲ့.ကမောက်ကမဖြစ်အောင် လုပ်တာတွေထဲ.. အဲဒီနတ်တွေက.. တော်တော်အရေးပါတယ်ထင်မိတယ်..။
ဂမ္ဘီရ.. Miracle တွေကို.. လူတွေယုံကြည်. ဘာမှန်းမသိတာတွေကို…ကြောက်ရွ့ံတတ်အောင်လည်း.. ဒီနတ်စိမ်းတွေနဲ့..သူ့သူငယ်ချင်းဆိုသူတွေက ..သင်ပေးခဲ့တယ်လို့.. ထင်ပါတယ်..။
သေသေချာချာ သုသေတနပြုပြီး.. သီးခြားစီဖြစ်အောင်..သတ်မှတ်ခွဲထုတ်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျား…။
ဟိန္ဒူနတ်တွေစုစုပေါင်းကလည်း ၃၇မင်း(၃၇ပါး)ရှိတယ်ဆိုတာ.. မှန်ပါသလား..သိချင်ပါတယ်.။
ဟုတ်ကဲ့ ၊ ဟိန္ဒူ နတ်တွေထဲမှာ ဗြဟ္မာ၊ ဗိဿနိုး၊ သီဝ ဆိုပြီး TRIMUTY ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီ အကြောင်းကို ကျွန်တော် ဆက်လက်ရေးသွားမှာဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က နံပါတ်စဉ်
အတိုင်း တစ်ခုချင်းစီ(နတ်တစ်ပါးချင်းစီ) ဆက်လက်ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်၊ အကယ်၍များ (၅) ရိုးရာနတ် များအကြောင်းကိုပဲ သိချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ဦးစားပေး အနေနဲ့ တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကနားစီး ချစ်ရင်ထူး ရဲ့ 
စေတနာ အရေးအသားလေးတွေ ကြောင့်